Intel Cold Cold Hack 🥇 Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
INTEL Oku nke Ọrụ Black Ops: Cold War Hack
BO Cold agha nwere ike na-abịaru nso dị ka ezi hacker iji INTEL!
Chọrọ inwe mmetụta nke COD Black Ops anyị: Cold War mbanye anataghị ikike maka onwe gị? Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Amachila oge ị ga eji eji aghụghọ anyị! Zụta otu ngwa ahịa izu 1 taa!
Nke a bụ nhọrọ nke naanị ndị na-agba ọsọ raara onwe ha nye ga-eji. Keyzụta igodo ngwaahịa ọnwa 1 taa!
BO Cold War bụ otu n'ime mkpọmkpọ oku oku kacha ewu ewu anyị hụtụrụla, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya ịzụlite INTEL Cold War Hack iji kwekọọ na hyp. Nweta ohere inweta otu aghụghọ nke ga-agbanwe ụwa gị!
Oku nke ọrụ Black Ops: Agha Nzuzo Ozi INTEL
Oku ọrụ dị egwu ga-enwe ngwa ọrụ a nke ukwuu, dịka atụmatụ niile ịchọrọ iji chịkwaa ndị na-emegide gị ga-anọ ebe a. Na ọtụtụ visual atụmatụ (dị ka iro / Enyi na Enyi ESP, Iro iro, na Visible Lelee), ị ga-mgbe niile mara ebe ndị iro dị na ị ga-enwe ike aka ha ọ bụla ị ga-amasị!
The COD Black Ops: Cold A Intel Intel Aimbot enweghị isi, onye ọ bụla nwere ike iji ya - ị gaghị abụ onye agha nwere oge ochie nke hacks iji ghọta usoro a. GamePron ga-etinye ahụmịhe onye ọrụ gị tupu ihe ọ bụla ọzọ, nke mere na nsonaazụ ya na-abụkarị kpakpando!
Intel CPU naanị(Chọrọ Virtualization na Bios nyeere !!!)
Nweta ohere niile dị ịtụnanya enyere na Black Ops Intel Hack! Site na Aimbot a tụkwasịrị obi ruo na mgbidi mgbidi, ngwá ọrụ a ga-enye gị ohere ịnweta ihe ọ bụla. Echegbula ndị niile na-enweghị COD Cold War Hacks!
Iro / enyi na enyi esp
Ogologo onye iro
Aimbot nwere FOV & Smooth customization
Chọsie ike imezi ihe
Chọsie ike snaplines
Peeji esp acha uhie uhie maka Ọkpụkpụ
FOV ESP On / Gbanyụọ
Banyere Intel Cold War
COD Black Ops: Cold War Intel bụ ihe ngwọta dị mfe (ma a pụrụ ịdabere na ya) maka oku niile nke Fans ọrụ nọ ebe ahụ. Ndị aghụghọ bụ esịtidem, na ike ga-eji mgbe nkwanye ruru ka “Streamproof” nhọrọ! Dị ka aha ahụ ga-egosi, naanị CPU akwadoro maka nhọrọ a ga-abụ Intel (na ị ga-enwerịrị Virtualization nyeere gị BIOS!). Gba egwuregwu na ihuenyo zuru oke mgbe ị na-eji mbanye anataghị ikike a kwụ ọtọ, nke bụ ihe ndị mmepe ndị ọzọ na-amachi.
Kedu ihe kpatara iji Intel Cold Cold karịa ndị ọzọ na-enye ọrụ?
Kedu ihe kpatara na ị gaghị etinye okwukwe gị na ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ntanetị GamePron ghọtara ihe onye ọrụ ahụ chọrọ site na ngwaọrụ ha, ọ bụ ya mere anyị ji enwe ike ịnapụta ya mgbe niile - ndị ọzọ na-enye ọrụ ga-agbasi mbọ ike iji nyere ndị ahịa ha aka na isi, ebe ihe niile na-echegbu onwe ha bụ ịnwa ịtọhapụ ha ọzọ. . Niile anyị Kpọrọ Ọrụ Black Ops: Cold War Hacks ga-eji nlezianya na àgwà dị mma, dịka nke ahụ bụ naanị ụzọ ị ga-esi nweta ọtụtụ ihe hacks / ngwaọrụ gị!
Nchịkọta nhọrọ egwuregwu anyị abụrụla otu n'ime ihe ndị ama ama mere ndị mmadụ ji achọ ọrụ anyị. Inwe ikike ime mgbanwe na-elu dị mkpa dị ka onye na-egwu egwu, ọkachasị mgbe ị na-akpọ Oku ọrụ Black Ops: Cold War. Egwuregwu ọhụrụ ga-enye asọmpi siri ike, mana ị nwere ike iji COD Black Ops: Cold War Intel Hack iji kwado ha! Ma ị ga-azọda egwuregwu ọhaneze ma ọ bụ na ị ga-egwu egwuregwu nke onwe, iji menu egwuregwu anyị ga-eme ka ikuku na-emeri.
A2. Emela, ị gaghị enubata na otu aghụghọ a ọ ga - ahụ ndị na - ekiri ya.
Q7. Ndị aghụghọ ahụ na-arụ ọrụ na Warzone mode?
A7. Ngwaahịa a na-arụ ọrụ na Multiplayer na Zombies. B WARGH WAR OZI.
Chọrọ inwe mmetụta nke COD Black Ops: Col War Hack maka onwe gị? Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Ma ike gwụrụ gị ịdabere na randoms iji nyere gị aka pụta, ma ọ bụ na ịchọrọ ịhụ ihe ọ dị na "n'akụkụ ọzọ", iji INTEL Cold War Cheat ga-enyere gị aka imeri n'ọtụtụ ụzọ karịa otu.
Njikere Na-achị anyị na COD BO Cold War INTEL Hack?